Huawei ၏ရည်မှန်းချက်မှာ အပြည့်အဝချိတ်ဆက်ပြီး အသိဉာဏ်မြင့်သော ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပေါ်စေရန် လူတိုင်း၊ အိမ်တိုင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းဆီသို့ ဒစ်ဂျစ်တယ် ယူဆောင်ပေးရန်ဖြစ်သည်။
Huawei ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ?
Huawei ကုမ္ပဏီကို ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Huawei ကုမ္ပဏီ သည် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ (အိုင်စီတီ) ဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းနည်းများနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ် စမတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုး ပေးနေသည့် ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပြည့်အဝချိတ်ဆက်လျက် အသိဉာဏ်မြင့်ကမ္ဘာကြီး ဖြစ်လာစေရန် လူတိုင်း၊ အိမ်တိုင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းဆီကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ယူဆောင်လာပေးရန် Huawei က ကတိပြုထားပါသည်။ Huawei ကုမ္ပဏီတွင် ၀န်ထမ်းပေါင်း ၁၉၄,၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး၊ ကမ္ဘာ့ဒေသအသီးသီးရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၁၇၀ ကျော်တွင် လုပ်ကိ်ုင်လျက်ရှိကာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၃ ဘီလျံကျော်ကို ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။
Huawei ၏ end-to-end ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ solution များနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများသည် သာလွန်ကောင်းမွန်ရုံ သာမက လုံခြုံစိတ်ချမှုလည်းရှိပါသည်။ စီးပွားရေးဂေဟမိတ်ဖက်များနှင့်အတူ ပွင့်လင်းသော ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ခြင်းများအားဖြင့် သုံးစွဲသူများအတွက် ရေရှည်တန်ဖိုးကို ဖော်ဆောင်ပေးပါသည်။ လူသားများကို ပိုမိုပါဝင် ခွင့်ရှိစေသလို လူသားတို့၏ နေထိုင်မှုဘ၀ကို တိုးတက်မြင့်မားစေပါသည်။ အမျိုးမျိုးသော အရွယ်အစားစုံ အဖွဲ့အစည်းများတွင် တီထွင်ဖန်တီးမှုများ ရှိစေရေးအတွက်လည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ Huawei သည် သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်အလိုက် ဦးတည်ကာ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကမ္ဘာကြီးကို ရှေ့တိုးမောင်းနှင်နိုင်မည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ထိုးဖောက်အောင်မြင်မှုများကို အာရုံစိုက်လျက် အခြေခံသုတေသန လုပ်ငန်းတွင် အမြောက်အများရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ Huawei ကုမ္ပဏီ >>
Huawei သည် ဝန်ထမ်းများက အပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်သော ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ Union of Huawei Investment & Holding ကုမ္ပဏီမှတဆင့် စုစုပေါင်း ရှယ်ယာရှင်ဝန်ထမ်း ၉၆,၇၆၈ ဦးပါဝင်သည့် အစုရှယ်ယာ စနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ထားသည်။ မည်သည့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်း (သို့) ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ Huawei တွင် ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ထာခြင်း မရှိပါ။
Huawei တွင် မျှတကောင်းမွန်သော ကော်ပိုရိတ် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ရှိသည်။ အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သော ဝန်ထမ်း များက အဖွဲ့ဝင် ၁၁၅ ဦးပါဝင်သော ကိုယ်စားပြုကော်မရှင်ကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည်။ အဆိုပါ ကော်မရှင် ကနေ အုပ်ချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဌနှင့် ကျန်ဘုတ်အဖွဲ့ဒါရိုက်တာ ၁၆ ဦးကို ရွေးချယ်သည်။ ဒါရိုက်တာများ ဘုတ်အဖွဲ့က ဒုတိယဥက္ကဌလေးဦးနှင့် အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာသုံးဦးကို ရွေးချယ်သည်။ ဒုတိယဥက္ကဌ သုံးဦးသည် ကုမ္ပဏီ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဌများအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။
အလှည့်ကျဥက္ကဌက အလှည့်ကျဥက္ကဌတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့နှင့် အမှုဆောင်ကော်မတီကို ဦးဆောင်သည်။ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည် ကော်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဗဟာဗျူဟာ နှင့် လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုများဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်သည်။ ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ၊ လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် သုံးစွဲသူများကျေနပ်စေရေးအတွက် ဘုတ်အဖွဲ့သည် တာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်သည်။
တချိန်တည်းမှာပါ ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဌသည် ကိုယ်စားပြုကော်မရှင်ကို အုပ်ချုပ်သည်။ Huawei ၏ အဆင့်မြင့်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အဖွဲ့ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ကိုယ်စားပြုကော်မရှင်သည် အကျိုးအမြတ်ဖြန့်ဖြူးရေး၊ အရင်းအနှီး တိုးမြှင့်ရေး၊ ဘုတ်အဖွဲ့ဒါရိုက်တာများနှင့် ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်ရွေးချယ်ခြင်းကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်သည်။
ပြင်ပအနေအထားအားဖြင့် ကုမ္ပဏီသည် သုံးစွဲသူများကို အမှီပြုသည်။ ကျွန်န်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်သမျှတိုင်းသည် သုံးစွဲသူများကိုသာ ဗဟိုပြုပြီး၊ ၎င်းတို့အတွက် ဆန်းသစ်သောထုတ်ကုန်များဖြင့် တန်ဖိုးများ ဖန်တီးပေးသည်။ ကုမ္ပဏီတွင်းအနေဖြင့် စွဲစွဲမြဲမြဲ နှစ်မြှုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ၀န်ထန်းများကို အမှီပြုသည်။ စူးစိုက်နှစ်မြှုပ်လုပ်ကိုင် ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Huawei တွင် အလုပ်ကြိုးစား လေလေ အကျိုးကျေးဇူးများလေလေဖြစ်သည်။
အောင်မြင်မှုကို အတူတကွ ဝေမျှနိုင်သည့် ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော ဂေဟစနစ်ကို တည်ဆောက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကမ္ဘာ့နေရာဒေသအသီးသီးရှိ Suppliers များ၊ မိတ်ဖက်များ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ လွတ်လပ်သော အရင်းအမြစ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ စံချိန်စံနှုန်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့် သုတေသနအင်စတီကျူ့ များနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် နည်းပညာအဆင့်မြင့်မားရေးနှင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ကူညီလုပ်ဆောင်နေလျက်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒေသအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်းသာမကာ အခွန်ငွေပေးဆောင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာနိုင်ငံများတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လည်းလိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ဒေသဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို ကူညီ ပေးလျက်ရှိကာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ သတင်းမီဒီယာများနှင့်လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံ လျက်ရှိပါသည်။
Huawei က ကမ္ဘာကြီးအတွက် မည်သည့်အရာများ ကမ်းလှမ်းပါသလဲ?
သုံးစွဲသူများအတွက် တန်ဖိုးကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
လုံခြုံပြီး တည်ငြိမ်သော ကွန်ရက်လည်ပတ်မှုကို သေခြာစွာဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
အိုင်စီတီလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ကျွန်ုပ်တို့ မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်သည်။
စိတ်နှစ်လုပ်ကိုင်သော ၀န်ထမ်းများအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေအထားဝန်းကျင်များဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသည်။
ICT ဒေတာပို့ပိုက်လိုင်း မဟာဗျူဟာကို အာရုံစိုက်၍ သာလွန်သော ဆက်သွယ်ရေးကမ္ဘာတစ်ခုကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပို၍အဓိကကျသော နည်းပညာများ၊ အခြေခံ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း လုပ်နိုင်စွမ်းရည်များ၊ စနစ်တည်ဆောက်ပုံများ၊ စံညွှန်းများ နှင့်၊ ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးမှုတို့တွင် ဆက်လက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုများပြားသော၊ ပိုခေတ်မီကောင်းမွန်သော၊ ဆောင်ရွက်မှုပိုမြင့်ပြီး လုံးဝစောင့်နေရန်မလိုသော စိတ်ချရသည့် နောက်ထပ်ပိုက်များကို စီစဉ်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုကောင်းသော အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံမျိုး ဖန်တီးပေးရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။
အဓိကတန်ဖိုးထားမှု : ပွင့်လင်းမြင်သာခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် အတူတကွအောင်မြင်ခြင်း
ဂေဟစနစ်နှင့် နယ်ပယ်ဖွံ့ဖြိုးခြင်း : စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
အဓိကပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုများ နှင့် နယ်ပယ်တန်ဖိုး
Huawei သည် နိုင်ငံနှင့် နယ်ပယ်ပေါင်း ၁၇၀ ကျော်တွင် ကွန်ယက် ၁၅၀၀ ကျော် တည်ငြိမ်စွာ လုပ်ငန်းလှည်ပတ်စေရေးအတွက် ပံ့ပိုးခဲ့ပြီး ၎င်းမှာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့်ကို ပံ့ပိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Huawei သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် 4.5G ကွန်ယက်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ မီလီယံ ၃၀ ကျော်သော အိမ်ထောင်စုများအား ကျွန်ုပ်တို့၏ WTTx ကြိုးမဲ့ဘရော့ဘန် ဖြေရှင်းနည်းအား ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ ထိုအပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၉၀ ကျော်သော မိုဘိုင်း backhaul ကွန်ယက်များကို နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်တွင် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ Huawei သည် စီးပွားရေးသုံး cloud ကွန်ယက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၁၇၀ ကျော်သော သဘောတူ စာချုပ်များကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ VoLTE နှင့် VoWiFi ဖြေရှင်းနည်းများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ကွန်ယက်ပေါင်း ၁၁၀ တွင် အသုံးပြုပြီးဖြစ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Cloud ဝန်ဆောင်မှု platform သည် ၄၀၀၀၀ ကျော်သော မိတ်ဖက်များကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ၆၀၀၀၀၀ ကျော်သော ဒစ်ဂျစ်တယ် အကြောင်းအရာများနှင့် အပလီကေးရှင်းများကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။ မိတ်ဖက်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်တို့နှင့် အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကာ Huawei သည် cloud computing ဖြေရှင်းနည်းများအား နိုင်ငံနှင့် နယ်ပယ်ပေါင်း ၁၃၀ ကျော်ရှိသုံးစွဲသူများအတွက် ပံ့ပိုးခဲ့ပါသည်။ ထိုအပြင် virtual machine ပေါင်း ၂ မီလီယံနှင့် cloud data center ပေါင်း ၄၂၀ ကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Smart City ဖြေရှင်းနည်းများကို နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်ရှိ မြို့ပြပေါင်း ၁၀၀ ကျော်တွင် အသုံးပြုပြီးဖြစ်ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံရှိ smart city များအတွက် နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများကိုရေးဆွဲရာတွင် Huawei မှ ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ Safe City solutions များကို နိုင်ငံနှင့် နယ်ပယ်ပေါင်း ၈၀ ကျော်ရှိ မြို့ပြပေါင်း၂၀၀ ကျော်တွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော လူဦးရေပေါင်း ၈၀၀ ကျော်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် Huawei ၏ omnichannel ဘဏ္ဍာရေး ဖြေရှင်းနည်းများသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်း ၃၀၀ ကျော်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပြီး ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများထဲတွင် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ဘဏ် ၁၀ ခုအနက်မှ ၆ ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် Huawei ၏ ပိုမိုချိတ်ဆက်ကောင်းမွန်သော Smart Grid Solution များကို နိုင်ငံပေါင်း ၆၅ နိုင်ငံတွင် အသုံးပြုခဲ့ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား နယ်ပယ်ရှိ customer ၁၇၀ ကျော်အား ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပါသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တွင် လုပ်ငန်းမိတ်ဖက် ၆၀ ကျော်နှင့်အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကာ ၂၂၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာကျော်ရှိသည့် မီးရထားသံလမ်းများနှင့် အဝေးပြေးလမ်းမကြီများအတွက် အသုံးပြုသော ကွန်ယက်များနှင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ခရီသည်ပေါင်း ၃၀ မီလီယံရှိသည့် လေဆိပ် ၁၅ ခုကော်အတွက် Digital Urban Rail နှင့် Smart airport solution များကို ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် စမတ်ဖုန်းပေါင်း ၁၃၉ မီလီယံခန့်ကို ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး ၎င်းမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ထက် ၂၉% တိုးတက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်အပြင် ၅ နှစ်ဆက်တိုက် ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Huawei ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စမတ်ဖုန်း ဈေးကွက်ရှယ်ယာသည် ၁၁.၉% အထိတိုးတက်ခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆင့်သည် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ဈေးကွက်ဦးဆောင်သူ ကုမ္ပဏီ သုံးခုထဲမှ တစ်ခုအဖြစ်အခိုင်အမာ ရပ်တည်ခဲ့ပါသည်။
2015 ခုနှစ်တွင် Huawei သည် ကမ္ဘာ့ဥာဏပိုင်ဆိုင်မှု အဖွဲ့အစည်း၏ ကိန်းဂဏန်းစာရင်းအင်းများအရ အပ်ပလီကေးရှင်းပေါင်း 3,898 ဖြင့် ဒုတိယနှစ်တွက် ထိပ်တန်း မူပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသူအဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ Huawei ၏ LTE ကွန်ရက်များသည် မြို့တော်များအပါအ၀င်မြို့ပေါင်း 140 ကို လွှမ်းခြုံပေးပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် LTE စီးပွားဖြစ်ကွန်ရက်ပေါင်း 400 ကျော်နှင့် EPC စီးပွားဖြစ်ကွန်ယက်ပေါင်း 180 ကျော်ကို ဆောင်ရွက်အသုံးချခဲ့သည်။ အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်တွင် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးသော 1T အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကွန်ယက် (OTN) ကိုတည်ဆောက်ရန် Huawei သည် ဥရောပအော်ပရေတာများ နှင့် စပ်တူလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး နည်းပညာ နယ်ပယ်တွင် အမြန်ဆုံးနှုန်းဖြစ်သည့် လိုက်ဖ်ကွန်ရက်များတွင်3ထရီဂါဘိုက် အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထုတ်လွှင့် စမ်းသပ်မှုများကို ပြီးမြောက်ရန် BT နှင့်လည်း ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ Huawei သည် လျင်မြန်သော IoT ဖြေရှင်းနည်းအားအခြေခံသည့် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးသော SDN ကိုလည်း ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Huawei သည်x86 အခမဲ့ တည်ဆောက်ပုံတွင်လည်ပတ်နေသည့် ဆေ့ာကပ် 32 ခုပါသည့် ကမ္ဘာ့ပထမ အသေးဆုံးသော ဆာဗာ Kunlun ကိုလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ 2015 ခုနှစ်တွင် Huawei သည် စမတ်ဖုန်းအလုံးရေ သန်း 100 နှင့်အထက်ကို ဈေးကွက်တွင်းသို့ တင်ပို့ခဲ့သည်။ GFK နှင့်အညီဆိုလျှင် Huawei သည် 2015 ကမ္ဘာ့စမတ်ဖုန်း ဈေးကွက်တွင် အဆင့်3နေရာတွင်ရပ်တည်လျက်ရှိပြီး 2015 တရုတ်စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်တွင် ဈေးကွက်ဝေစုအားဖြင့် အဆင့် 1 နေရာတွင်ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။
5G နည်းပညာ R&D စင်တာများကို နိုင်ငံပေါင်း(၉)နိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ထားသည်။ မိမိတို့၏ 400G ပင်မရောက်တာများကို 2014 ခုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင် အသုံးပြုပြီး ကမ္ဘာအနှံ့တွင် စီးပွားဖြစ်ကွန်ရက် 186 ခုကိုတည်ဆောက်ထားပါသည်။ 2014 ခုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင် ဒေတာစင်တာပေါင်း 480 ခုကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက် ဒေတာစင်တာ 160 ခုမှာ ကလောက် ဒေတာစင်တာများဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးရေးစင်တာ 45 ခုကိုလည်ပတ်လျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ဝန်ဆောင်ပေးမှု စင်တာများ (SOC များ) 20 ခုကိုလည်ပတ်လျက်ရှိသည်။ စံနှုန်းများ 177 ခုနှင့် အခမဲ့ ရင်းမြစ်အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး အဓိကရာထူး 183 နေရာကို ရယူထားသည်။ 2014 ခုနှစ်တွင် Huawei ကစမတ်ဖုန်းအလုံးရေ 75 သန်းကို ဈေးကွက်တင်ပို့ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေး ဘေးအန္တရယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် မိမိတို့၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလုပ် ငန်းများမှာ ကုံလုံမှု၊ ခိုင်မာမှုနှင့် စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီမှု ဆက်ရှိနေသည်ကိုသေချာစီမံရန် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်ထိန်းချုပ်ရေး စင်တာ (FRCC) ကို လန်ဒန်မြို့တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ မိမိတို့၏ ဥရောပ လောဂျစ်စတစ်စင်တာကို တရားဝင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအဖြစ် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဥရောပ၊ ဗဟိုအာရှ၊အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာဖရိနိုင်ငံများတစ်လျှောက်တွင် ဝန်ဆောင်ပေးထားသည်။ ဥရောပသမ္မဂမှအစပြုထားသော 5G စီမံကိန်းများအား အဓိကဖော်ဆောင်ပေးသူနှင့် UK ရှိ 5G တီထွင်ဆန်းသစ်မှုစင်တာ (5GIC)တည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအနေဖြင့် ကမ္ဘာအနှံ့ 5G ဂေဟစနစ်တစ်ရပ်ကိုဦးဆောင်တည်ဆောက်လျက် ကျွန်ုပ်တို့က 5G အဖြူရောင်စာရွက်ကို(အဆိုပြုချက်)ကိုတင်ပြခဲပြီး ပူးတွဲ သုတေသနဖော်ဆောင်ရာ၌ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ တက္ကသိုလ်ပေါင်း 20 ကျော်နှင့်အတူ နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အနာဂတ်ကြိုးမဲ့နည်းပညာများ၊ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်စံချိန်စံညွှန်းများ နှင့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်လက်ခွဲများဖော်ဆောင်မှုတွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့က တက်ကြွသောအခန်းကဏ္ဍဖြင့် ပါဝင်ဖြည့်ဆည်းလျက်ရှိသည်။ မိမိတို့၏ စီးပွားဖြစ် 400G ရောက်တာဖြေရှင်းမှုကို ဝယ်ယူသုံးစွဲသူ ဖောက်သည် 49 ဦးမှအသိမှတ်ပြုထားပြီး အကြီးစားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှာ Backbone routers၊ super-large-capacity 40T WDM prototype၊ andanew AOSN architectureများအတွက် 1T router line card ကိုပထမဦးဆုံး ဈေးကွက်ဖြန့်ချီသူဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ စီးပွားဖြစ် LTE ထိရောက်စွာအသုံးချမှုတွင်လည်း ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် ဦးဆောင်သူအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ရပ်တည်ခဲ့ပါသည်။ မိမိတို့၏ဖြေရှင်းနည်းများကို မြို့ပေါင်း 100 နှင့်အထက် ငွေကြေးစီမံမှုဆိုင်ရာစင်တာကိုးခုတွင် ထိရောက်စွာအသုံးပြုထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အသုံးပြုသူ အတွေ့အကြုံ ဗဟိုပြု လျှင်မြန်မှုရှိသော ကွန်ရက်တည်ဆောက်ပုံကို ၎င်းအမျိုးအစားတွင် ပထမဆုံးဖြစ်သည့် လျှင်မြန်မှုခလုတ် S12700 နှင့်တကွ ဈေးကွက်ဖြန့်ချီခဲ့ပါသည်။ ဤကမ်းလှမ်းချက်များမှာ Cloud Computing၊ Bring Your Own Device (BYOD)၊ Software-Defined Networking (SDN)၊ Internet of Things (IoT)၊ multi-service support၊ နှင့် Big Data အပ်ပလီကေးရှင်းအသစ်များအတွက် စံနမူနာဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲသူဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းနှင့် "Make it Possibble " အမှတ်တံဆိပ်နေရာပြမှု တို့ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးနည်းဗျူဟာ တစ်ခုကို ဆက်လက်ဦးတည်အလေးထားပါသည်။ မိမိတို့၏ အခရာကျသည့်၊အရှိန်အဝါကြီးသည့် P6 သည် အမှတ်တံဆိပ် သတိပြုမှုနှင့် အမြတ်အစွန်းအားဖြင့်ဆိုလျှင် ထူးခြားသာလွန်သည့် ရလဒ်များကို ဆွတ်ခူးရရှိထားပါသည်။ သမိုင်းတွင်မည့် ဖောက်ထွက်ကျော်လွှားမှုများကို မိမိတို့စမတ်ဖုန်း လုပ်ငန်းတွင် မှတ်တမ်းတစ်ရပ်ထူနိုင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်(၃)တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ မိမိတို့မိုဘိုင်းဖုန်းများအား ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်သတိပြုမှုကြောင့် နှစ်စဉ် 110% အထိ တိုးမြှင့်လာသည်ကို သိရှိခဲ့သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုအစဉ်အဆက် အထူးမြှင့်တင်အားပေးလျှက် ဥရောပတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုခြေလှမ်းစတင်လိုက်ပြီး UK တွင် နောက်ထပ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည့်အပြင် ဖင်လန်နိုင်ငံတွင် R&D စင်အသစ်ကိုတည်ထောင်ခြင်း၊ ဒေသဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ (BODs) နှင့် ပြင်သစ်နှင့် UK တို့တွင် အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ကိုလည်း ခန့်အပ်ထားပါသည်။ 3GPP LTE ပင်မ သတ်မှတ်ချက်များအတွက် အသိအမှတ်ပြုထားသည့် စံချိန်စံညွှန်းအပ်ပလီကေးရှင်းများအားလုံး 20% ကို ထည့်ဝင်ခဲ့သည်။ နည်းပညာနယ်ပယ်၏ပထမဆုံးသော 400G DWDM Optical Transport System ကို ပွဲထုတ်ခဲ့ပြီး IP နယ်ပယ်တွင် နည်းပညာအသိုင်းအဝိုင်း၏ အကြီးမားဆုံးသော စွမ်းအားရှိသည့် 480G လိုင်းကတ်ကိုလည်း မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ကလောက်အသုံးပြုခြင်းတွင် 33 နိုင်ငံမှ ဝယ်ယူသုံးစွဲသည့်ဖောက်သည်များနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာကလောက်ကိုလည်း တည်ဆောက်ခဲ့၍ ယင်းကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလုပ်အတွက် ဝန်ထမ်းပေါင်း 70,000 ဦးကိုအသုံးပြုခဲ့ရပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးသောနိုင်ငံများတွင် ရောင်းချမှုနှုန်းတဟုန်ထိုးမြှင့်တက်ခဲ့သည့် Ascend P1၊ Ascend D1 Quad နှင့် Honor ကဲ့သို့သောအလယ်အလတ်မှဈေးနှုန်းကြီး လူသိများသည့် စမတ်ဖုန်းများကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
GigaSite နှင့်ဖြေရှင်းနည်းလမ်း U2Net တည်ဆောက်ပုံကိုလည်း ပွဲထုတ်ခဲ့သည်။ ကလောက်အသုံးပြုခြင်းဒေတာစင်တာအခု 20 ကိုလည်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ စမတ်ဖုန်းအလုံးရေ သန်း 20 ခန့်ကို ဈေးကွက်သို့တင်ပို့ခဲ့သည်။ Symantec ၏ရှယ်ယာများကို Huawei Symantec တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း(၃၅၀)ဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့သည်။ 2012 ဓါတ်ခွဲခန်းများကိုလည်း တည်ထောင်ခဲ့သည်။ HUAWEI SmartCare ဝန်ဆောင်မှုဖြေရှင်းနည်းကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ LTE ဆုတံဆိပ်ထိပ်တန်း ခြောက်ခုကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
SingleRAN ကွန်ရက်ပေါင်း 80 ကို ထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုဖြန့်ဝေခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက် 28 ခုမှာစီးပွားဖြစ် LTE/EPC ကွန်ယက်များဖြစ်ကြသည်။ ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေး အကဲဖြတ်စီစစ်မှုစင်တာကို UK တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ စေတနာအကျိုးဆောင် ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းရေး သဘောတူချက်တစ်ခုကို တရုတ်စက်မှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန (MIIT)နှင့် လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် UN လှိုင်းခွင်ကျယ်ကော်မစ်ရှင်နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ “2010 အဖွဲ့အစည်း ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအသုံးပြုခြင်း ဆုတံဆိပ်” ကို The Economist မှချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
ရေဒီယိုသုံးစွဲမှု ကိရိယာများအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဈေးကွက်ဝေစုတွင် အဆင့်2ချိတ်ခဲ့သည်။ နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုရှိ TeliaSonera အတွက် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးသော LTE/EPC စီးပွားဖြစ်ကွန်ရက်ကို အောင်မြင်စွာတပ်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ရောက်တာများမှ ထုတ်လွှင့်မှုစနစ်အဖြစ် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး အစွန်းချင်းထိဆက်မှု 100G ဖြေရှင်းနည်းကိုလည်း မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ “2009 အဖွဲ့အစည်း ဆုတံဆိပ်ကို” IEEE Standards Association(IEEE-SA) ထံမှ ရရှိထားသည်။ ပေါ်ထွန်းစဈေးကွက်များတွင် စွမ်းဆောင်မှုနှင့်ဖြည့်ဆည်းထည့်ဝင်မှုကြောင့် လုပ်ငန်းအတွက်ဆုတံဆိပ်ဖြစ်သည့် Financial Times' Arcelor Mittal Boldness ဆုတံဆိပ်ကိုရရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအရှိဆုံးကုမ္ပဏီတွင် အဆင့်ငါးချိတ်ခဲ့သည်။ Huawei ၏အဓိကထုတ်ကုန်များမှ ရင်းမြစ်သုံးစွဲမှုကို တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် 20% ကျော်လျော့ချမှုကို အောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နည်းလမ်းသစ်ဖြင့် စွမ်းအင်ပံ့ပိုးထားသည့် နေရာပေါင်း 3,000 ကျော်ကိုလည်း ထိရောက်စွာအသုံးချခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးကုမ္ပဏီများအနကမှကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် BusinessWeek ၏အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုခံရသည်။ မိုဘိုင်းကွန်ယက်သုံးကိရိယာများ၌ ကမ္ဘာ့အဝှမ်းရှိဈေးကွက်ဝေစုအားဖြင့် Informa ကအဆင့်3ပေးအပ်ခဲ့သည်။ မြောက်အမေရိကတွင် TELUS နှင့် Bell Canada တို့အတွက် ပထမဆုံးသော စီးပွားဖြစ် UMTS/HSPA အကြီးစားအသုံးချဖြန့်ဖြူးမှုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အလုံးရေသန်းပေါင်း 20 ကျော်ကိုဈေးကွက်တင်ပို့ခဲ့ပြီး မိုဘိုင်လှိုင်းခွင်ကျယ်သုံး ကိရိယာများတွင် ABI ကအဆင့် 1 ပေးအပ်ခဲ့သည်။ WIPO ၏ မူပိုင်ခွင့်ကော်ပိုရေးရှင်းစာချုပ် (PCT) အောက်တွင် အများဆုံးလျှောက်ထားသူဖြစ်ပြီး 2008 ခုနှစ်၌ လျှောက်လွှာပေါင်း 1,737 ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့၍ ကမ္ဘာအဝှမ်းရှိ LTE မူပိုင်ခွင့်၏ 10% ရှိသည်။
သိုလှောင်မှုနှင့်လုံခြုံရေး အသုံးပစ္စည်းများကိုဖန်တီးဖော်ဆောင်ရန် Symantec နှင့် စပ်တူလုပ်ကိုင်မှုကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အစွန်းချိတ်ဆက်မှု ပင်လယ်ပြင်ရေမျက်နှာအောက်ကွန်ရက်ဖြေရှင်းနည်းများကို ပေးအပ်ရန် Global Marine နှင့်လည်း စပ်တူလုပ်ကိုင်မှုကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ 2007 ခုနှစ်အကုန်တွင် ဥရောပရှိ ထိပ်သီးအော်ပရေတာအားလုံး၏ ပါတနာတစ်ဦးဖြစ်လာသည်။ 2007 Global Supplier ဆုတံဆိပ်ကို Vodafone မှချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဤဆုတံဆိပ်ချီးမြှင့်ခံရသည့် တစ်ဦးတည်းသောကွန်ယက်အသုံးချပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်ခဲ့သည်။စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလျော့ချရန် TCO ချွေတာရေးမှ တယ်လီကွန် ကယ်ရီယာများအတွက် ကွဲပြားသော အကျိုးခံစားခွင့်များကိုအရှိန်အဝါသက်ရောက်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ၎င်း၏ ALL IP FMC ဖြေရှင်းနည်း မဟာဗျူဟာကိုပွဲထုတ်ခဲ့သည်။
H3C ရှိ အစုရှယ်ယာ 49 ရာခိုင်နှုန်း တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း(၈၈၀) ကိုခွဲထုတ်သည်။ UMTS နည်းပညာများကို ဖော်ဆောင်ရန် ရှန်ဟိုင်းပူးတွဲအခြပြု R&D စင်တာကို Motorola နှင့်ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဗစ်ရှုဝါ မှတ်ပုံတင် (VI) အသစ်ကို မိတ်ဆက်ပြသခဲ့သည်။ VI အသစ်သည် မိမိတို့၏မူဝါဒများဖြစ့်သည့် ဖောက်သည်အလေးထားဦးတည်မှု၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ ပုံမှန်နှင့် ရေရှည်ခိုင်မာသော ကြီးပွားတိုးတက်မှု နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှုတို ကိုထင်ဟပ်စေသည်။
နိုင်ငံတကာမှ မှာယူမှုစာချုပ်အရ ပြည်တွင်းရောင်းချမှုကို ပထမဆုံးအကြိမ် ကျော်လွန်ခဲ့သည်။ ပိုမရွေးချယ်လိုသည့်သည့် တယ်လီကွန်ကိရိယာ ပေးသွင်းသူတစ်ဦးအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မူဘောင်သဘောတူညီချက်ကို Vodafone နှင့် လက်မှတ် ရေးထိုးသည်။ မာတီလ်ဝန်ဆောင်မှု ကွန်ယက်သုံးစွဲမှု (MSAN) အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အော့ပ်တီကယ် ထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာ ကိရိယာများကို ပေးအပ်ရန် 21Century Network (21CN) ပေးသွင်းသူအဖြစ် British Telecom (BT) မှရွေးချယ်ခဲ့သည်။
TD-SCDMA ဖြေရှင်းနည်းများကို ဖော်ဆောင်ရန် Siemens နှင့်အတူ စပ်တူလုပ်ငန်းကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒတ်ခ်ျ အော်ပရေတာဖြစ်သည့် Telfort နှင့်အတူ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ စာချုပ်ကို ဥရောပတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။
လုပ်ငန်းဒေတာ ကွန်ရက်ပြု ဖြေရှင်းနည်းကိုဦးတည်လုပ်ကိုင်သော 3Com နှင့်လည်း စပ်တူလုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာဈေးကွက်များမှ ရောင်းအားသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၅၂ သန်းအထိ ပြည့်မှီခဲ့သည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း၇၅၀ အတွက် ပင်မမဟုတ်သော လုပ်ငန်းခွဲ Avansys မှ Emerson ကို ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် R&D စင်တ၄ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးများ ယူနစ် (ITU) နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
စတော့ဟုမ်းမြို့၊ ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင် R&D စင်တာကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်များမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း၁၀၀အထိ ရောင်းအားကောင်းခဲ့သည်။
ဘန်ဂလောမြို့ ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် R&D စင်တာကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးယင်းသည် CMM အဆင့်-4 တရားဝင်အသိမှတ်ပြုမှုကို 2001 ခုနှစ်တွင်ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ကာ 2003 ခုနှစ်တွင် အဆင့်-5တရားဝင်အသိမှတ်ပြုမှုကိုရယူနိုင်ခဲ့သည်။
ကြိုးမဲ့ GSM- အခြေပြု ဖြေရှင်းနည်းများကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ တရုတ် မြို့ ပြဒေသများတွင် 1998 ခုနှစ်၌ ချဲ့ ထွင်ခဲ့သည်။
1995 ခုနှစ်တွင် ရောင်းအားအမြင့်ဆုံးအဖြစ် RMB1.5 ဘီလီယံ ရရှိပြီး အဓိကရောင်းရငွေမှာ တရုတ်ပြည်ကျေးလက်ဒေသရှိဈေးကွက်များမှဖြစ်သည်။
R&D ကိုကနဦးအစပျိုးခဲ့ပြီး ကျေးလက်ဒေသ ဒစ်ဂျစ်တယ် ပြောင်းလဲမှုဖြေရှင်းနည်းကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
သီးခြားလွတ်လပ်သော PBX နည်းပညာ၏ သုတေသနနှင့် စီးပွားဖြစ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှု တွင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဟိုတယ်များနှင့် အသေးစား လုပ်ငန်းများကို ရည်ရွယ်ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။
Private Branch Exchange (PBX) ခလုတ်များထုတ်လုပ်သည့် ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီအတွက် Shenzhen တွင် အရောင်းကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
အရည်အသွေးမှာ Huawei ရပ်တည်နိုင်မှု၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး Huawei အားဖောက်သည်များရွေးချယ်ရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်ကို မှတ်ယူထားပါ။
အရည်အသွေးကို အတူတကွတည်ဆောက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် မျှော်မှန်းထားချက်များကို Huawei တန်ဖိုးအစဉ်အလာတစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာအဖြစ် တိကျမှန်ကန်စွာ မှတ်သားခံယူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စည်းမျဉ်းများနှင့် လုပ်ထုံးများကို လေးစားပြီး ပထမဆုံးဈေးကွက်သို့စတင်ဝင်လာသည့်အခါကတည်းက မှန်ကန်သည့်အရာကိုသာ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အစဉ်အဆက် တိုးတက်မှုအတွက် ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ အလားအလာကို ဖြည့်ဆီးပေးခဲ့သည်။
အခွင့်အလမ်းများနှင့်စွန့်စားမှုများကို ဟန်ချက်ညီမျှစေရန် ကျွန်ုပ်တို့က ဖောက်သည်များနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ပြီး ဖောက်သည်များလိုအပ်ချက်ကို လျှင်မြန်စွာဖြည့်ဆည်းပေးလျှက် ရေရှည်ခိုင်မာသည့် ကြီးထွားမှုကို ရယူလျက်ရှိသည်။
အရည်အသွေးအာမခံပေးသည့် ထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဖြေရှင်းနည်းများကို ဖောက်သည်များထံသို့ ပေးအပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့က တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ပြီး ဖောက်သည်တစ်ဦးချင်းစီအတွက် တန်ဖိုးကိုဖန်တီးပေးရာတွင် မိမိတို့၏ ကတိကဝတ်ကို ဖောက်သည်များမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ကြုံစေရန် အဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
ပင်မစာမျက်နှာ /အဖွဲ့အစည်း မိတ်ဆက်